ASA UPVC sheet saqafka jiingado W1025 - Shiinaha Hubei Shengyu Dhismaha Qalabka
ANGU sheet saqafka
FRP sheet saqafka translucent
sheet saqafka Warshadaha
sheet saqafka Residental
UPVC guddi derbiga
Ka dib-sale Service
temperatuer High & daxalka sheet saqafka iska caabin
Glass fiber xoojiyeen sheet saqafka cusbi RY720-B
ASA UPVC sheet saqafka jiingado W1025
cusbi ASA UPVC saqafka jiingado sheet T980
sheet daylighting FRP TT980
UPVC T1110 guddi derbiga
sheet daylighting FRP WW1025
Shengyu UPVC sheet saqafka jiingado, laga sameeyey oo uPVC, dhameysato dhalaalaya la dumin kara ASA. Waxaa weli deggan midabka iyo guryaha jirka ka yar aalladda buluug shucaaca, waxaa qoyay, kulaylka, chillness iyo saamaynta. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in aqoon-isweydaarsiga, bakhaar, guryaha iyo saqafyada joogto ah oo kala duwan oo leh taariikh codsi sanado badan in dalal badan oo horumaray. sheet saqafka Shengyu UPVC waa fursad cusub oo loogu talagalay dhismaha saqafka iyo derbiga cladding. Waa adag, waara oo midabka iyo khafiifa, tha fiican ...
Tirada Min.Order: 1000meters
Supply Kartida: per Month 100 000Meters
Shuruudaha Payment: L / CT / T
FOB Price: 2.99-7.75 / mitir oo laba jibbaaran
Shengyu UPVC sheet saqafka jiingado, laga sameeyey oo uPVC, dhameysato dhalaalaya la dumin kara ASA. Waxaa weli deggan midabka iyo guryaha jirka ka yar aalladda buluug shucaaca, waxaa qoyay, kulaylka, chillness iyo saamaynta. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in aqoon-isweydaarsiga, bakhaar, guryaha iyo saqafyada joogto ah oo kala duwan oo leh taariikh codsi sanado badan in dalal badan oo horumaray.
sheet saqafka Shengyu UPVC waa fursad cusub oo loogu talagalay dhismaha saqafka iyo derbiga cladding. Waa adag, waara oo midab khafiifa iyo, ka sii wanaagsan tahay bir iyo sheet galvanized. More muhiim ah, oo waa inuusan marna miridhku doonaa park warshadaha culus.
dhumucdiisuna width cover Width Purlin Space Length miisaanka oogada color
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm Sida loo baahan yahay 3.0-6.0KG / ㎡ dhalaalaya White, Blue, Gray, Terracotta, Red
Iska caabin ah cimilada caan ah
Sida wax top daaha, cusbi injineernimada ASA waa caadi ahayn ku haboon isticmaalka dibadda. Xitaa bandhigi shucaaca aalladda buluug, waxaa qoyay, kulaylka, chillness iyo saamaynta, badeecada sii xasiloonida ee midabka iyo guryaha jireed. Baaritaano lagu qabtay Gabowga Test Center ee Arizona iyo Florida cadeeyo in uu ka yar yahay △ E 5 10 sano gudahood.
Shengyu sheet saqafka caag maraa 6,000h imtixaanka gaboobaya by Shiinaha National Test Center for Chemical Dhismaha Qalabka iyo natiijada △ E <4.
Shengyu UPVC sheet saqafka jiingado, ay modulus tabinta kulaylka waa 0,325 W / m. K, taas oo simanyihiin 1/3 leh in 10mm sheets dhoobo dhumucdiisuna, 1/5 leh in 10mm sheets cement oo dhumucdiisuna waxay, 1/2000 la mid ah xaashiyaha steel midabka oo dhumucdiisuna waxay 5mm.
Anti-daxalka qaab aad u fiican
Shengyu UPVC sheet saqafka jiingado, ay daaha dusha sare (cusbi ASA) ayaa qaab ciyaareed weyn ee imtixaanka anti-daxalka, taas oo aan hoos u dhici doonto by nabaad guur ee roobka iyo barafka. ASA cusbi waa adkaysi u kiimikooyin badan sida acid, xumadoodu, cusbo, iwm Sidaa darteed, waxaa haboon codsiga dibadda ee degaanka Xeebaha leh daxalka halis ceeryaanta milix iyo wasaqowga hawada culus yahay.
dusha ka mid ah sheet saqafka waa cufan oo siman, taas oo saameyn la mid ah sida caleemaha hooska badan. Waxa aanu u nuugo Carro iyo si fudud loo nadiifin karo by roobka.
Waxqabadka anti-load heer sare
Shengyu UPVC sheet saqafka jiingado uu leeyahay awood xoog leh oo ah dhalista culus. Baaritaanku, ay qabatay Shanghai degmada Dhismaha Waxyaabaha Qeybta Kormeerka Tayada iyo Test Station, waxay cadeyneysaa in aysan jirin crack xaalad of 800mm taageeraya taako iyo load 150kg codsatay.
Mid ka mid ah xabbad caadiga ah ee sheet saqafka culeyskiisu 1.87-6.0kg halkii mitir.
Iyadoo Shiinaha Certificate of Environmental Calaamadinta, alaabta this daliil fallaadho lahayn, qalabka volatilizable iyo wasakhda. Waa maxay more, waxaa lagu gebi ahaanba dib loo isticmaali karaa.
Previous: sheet daylighting FRP WW1025
Next: UPVC T1110 guddi derbiga
1.UPVC (ASA) go'yaal rooing waa ay khuseyso in ay xabbado saqafka ka 8 ° ilaa 22 °, taako purlin wax ka badan 800mm.
Sheet saqafka T980 waa ay khuseyso in ay xabbado saqafka ka 6 ° ilaa 22 °, taako purlin wax ka badan 1200mm.
2.Thermal wax qalabada aan si toos ah loo isticmaali karaa hoos xaashida.
Fadlan isticmaal sallaan ama goobaha kale ee loo baahan yahay inta lagu guda jiro rakibaadda.
Fadlan ha taagan inta u dhaxaysa laba purlins inta lagu guda jiro rakibaadda.
Waayo, saqaf gabled, go'yaal dhinac kasta waa in lagu dhejiyaa waqti isku mid ah la leben xigtaa ah.
Rakibaadda laguma talinayo in la fuliyo heerkulka hoos ku -5 ℃.
Ku rakib by roofers xirfadeed si loo hubiyo in tayada rakibo.
xirmi Horizontal by mid ka mid ah la ruxruxo iyo xirmi toosan oo aan ka yarayn 100mm.
jiingado iyo cladding derbigii la hagaajin karin by qabsatooyinkooduna bixisey ama boolal is-faaiidaysanayo.
Waayo, sheet kasta, laba nooc oo qabsatooyinkooduna waa in la si fiican u go'an oo ka mid ah purlin, marayay calamaada la ruxruxo.
Calamaada kasta oo la ruxruxo ee aagga noqnoqashada taagan waa in lagu rakibaa purlin ah by qabatooyin, iyo habka xoojinta waa in la qaato meelaha dabaysha culus.
Waayo, claddings derbiga, overlaps u dhexeeya labada purlins waa in lagu go'an laba rivets.
Barkimo Rubber waa in la isticmaalaa ka yar sheet haddii qamaar by qabatooyin, ee nuts fur waa in si sax ah loo adkeeyay, ma ka badan-dhagan.
go'yaal 6.Roofing waa in laga gooyaa by arkay mid lamafilaan ah.
Isticmaalka daloolin korontada si qodo godad.
Fadlan hubi go'yaal ayaa si sax ah ku riday on purlins hor godad qoditaanka dhigi.
Dhexroor dalool waa in uu ahaadaa 2mm ka ballaaran yahay in mandrel jillaab.
Fadlan isticmaal xabagta PVC in la shaabadeeyo daloolada aan ulakas u qoday.
8.Storage iyo qabashada
go'yaal The waa in lagu kaydiyaa on diyaarad deggan, taas oo noqon waa ka sii dheer tahay xaashida.
Go'yaal gaaban waa in loo on go'yaal dheer si looga fogaado in lahayo ku ah.
Ha leenahay profiles kala duwan ee shabaqa soo wada.
Fadlan ku kaydiso go'yaal ah ee hooska.
Iska ilaali jabiyay, ku xoqeen ama gunta lagu jiro taabato.
3 Lakabka Upvc rô ee ka dusiyeen
Carbon Fiber Upvc Sheet uu saqafku dumo
jiingado Clear jiingado caaga
Darka Aasaa dahaarka leh Sheet uu saqafku Upvc
Sheet Corruagted saqafka
Jiingado Maro adag saqafka
Sheets jiingado caaga Clear
Jiingado caaga saqafka
jiingado caaga jiingado Waayo Greenhouse
Sheet jiingado PCV Waxyaabaha saqafka
Jiingado PCV uu saqafku Sheet
Sheet jiingado uu saqafku dumo
Jiingado jiingado Cabirada
Jiingado jiingado Upvc
Fiber jiingado jiingado
jiingado culus Duty jiingado caaga
Xoog High Sheet uu saqafku Upvc
Ningax Upvc uu saqafku Sheet
Kerala Clear jiingado caaga Sheets uu saqafku dumo
Sheets caaga jiingado Large
Long taako Color dahaarka leh Sheet saqafka jiingado
Layers Multi Upvc saqafka Tile
Caaga Sheet Price jiingado
caaga Upvc Sheet uu saqafku dumo
PCV Oo Upvc Wave jiingado shingles
Sheets PCV jiingado caaga
PCV jiingado saqafka
PCV jiingado saqafka Sheets
PCV / Upvc Sheets uu saqafku dumo
Waxyaabaha qaydhiin Waayo Sheet jiingado saqafka
Dardaro Sheet saqafka cusbi Upvc caaga
Trapezoidal Upvc saqafka Sheet
Upvc caaga saqafka Sheet
Upvc Sheet uu saqafku dumo
Upvc uu saqafku Sheetcorrugated saqafka Sheet
Upvc Tile uu saqafku dumo
Sheet Upvc saqafka
Isticmaalo Sheet uu saqafku jiingado
White jiingado saqafka Sheet
Cinwaanka: No.180 Xinglong Rd, Degmada Duodao, Jingmen City, Hubei PR Shiinaha